CWP: Famerenana amin'ny antsipiriany ny tontonana fanaraha-maso maimaim-poana amin'ny fampiantranoana tranonkala. Avy amin'ny Linux
CWP: Famerenana amin'ny antsipiriany ny tontonana fanaraha-maso maimaim-poana amin'ny fampiantranoana tranonkala
CWP: famerenana amin'ny antsipiriany ny tontonana fanaraha-maso maimaimpoana ho an'ny fampiantranoana tranonkala
Taorian'ny lahatsoratra teo aloha tamin'ny «CWP» sy ny hafa «Paneles de Control» for «Web Hosting» antsoina hoe "CWP (Panel Web CentOS): Panel fanaraha-maso maimaim-poana amin'ny fitantanana tranonkala", amin'ity no hitodihantsika azy amin'ny lalina, izany hoe, hanao fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny Panel fanaraha-maso maimaim-poana amin'ny fampiantranoana tranonkala fantatra amin'ny hoe «CWP», antsoina koa «CentOS (Control) Web Panel».
Tadidio izany «CentOS (Control) Web Panel» toy ny ambiny «Paneles de Control» misy antsika manamora ny fitantanana mahomby sy mahomby ny tranokalanay voatantana ao anatin'ny Server voatantana tsirairay. Ary indrindra izany, «CWP» Is a Rindrambaiko maimaim-poana natao ho an'ny fitantanana haingana sy mora ny «Servidores (Dedicados y VPS)» (amin'ny CentOS ihany), miaraka amin'ny fikasana hampihena ny ezaka ataon'ny asa sarotra sasany, ankoatry ny tombontsoa maro hafa.
Ho an'ny fandinihana ankehitriny ny fampiharana dia tokony homarihina fa ao amin'ny Tranonkala ofisialin'ny CWP misy rohy misy ankehitriny mba hitsapana azy amin'ny alàlan'ny a Demo Web System. izay azo idirana araka ireto masontsivana manaraka ireto:
Login tsy SSL: https://79.137.25.230:2031
Login amin'ny tontolon'ny mpampiasa vaovao (Youtube Video)
Login tsy SSL: http://demo1.centos-webpanel.com:2082
SSL fidirana: https://79.137.25.230:2083
Na izany aza, ho an'ny fanadihadianay dia hampiasa ny 3.20 version an'ny fametrahana tena izy sy miasa an'ny «Control Web Panel».
1 Control Web Panel
1.1.1 Fikirana CWP
1.1.2 Mitantana fisie
1.1.4 Serivisy SQL
1.1.5 Kaonty mailaka
1.1.6 Fomba fiasa DNS
Vantany vao tafapetraka sy milamina «CWP», ary nosokafana tamin'ny alàlan'ny tranokala hiditra amin'ny sambany hahitanay a interface tsara an'ny mpampiasa tsotra sy voalamina, izay ny anaran'ny «Usuario (Username)» sy ny tsirairay avy «Contraseña (Password)» hamita amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra «Entrar (Login)». Araka ny aseho amin'ny sary etsy ambany.
Rehefa tafiditra ao anatiny ny «CWP»mampiseho ny mpampiasa ny efijery lehibe izay antsoina hoe«Tablero». Izay mampiseho ireto fampahalalana manaraka ireto amin'ny alàlan'ny default: Data an'ny fidirana farany, kisary famantarana ny fampiasana ny drafitra (tranokala) ary angon-drakitra ny drafitra (anaran'ny domain, Domain IP ary DNS Servers an'ny Hosting nifanarahana. havanana havanana mampiseho fampahalalana momba ny niditra ny mpampiasa, ilay fiteny voalamina azo ovaina izany, ary a bokotra fanamboarana miova avy lohahevitra interface, raha misy.
Ary manome fidirana amin'ireo faritra hafa ao amin'ny Rafitra izay:
Izay misy ireto fizarana manaraka ireto:
Lisitry ny fizotrany
Fikatsoan'ny rafitra fisie
Asehoy ny fizotran'ny Mysql
Fomba fiasa DNS
Tonian'ny DNS Zone
Mpitantana rakitra EXtplorer
Izay misy ireto safidy manaraka ireto:
Hijery ny lisitry ny laharana
Ary eo amin'ny faran'ny tsipika mitsivalana havia dia asehony antsika ireto azo atao ireto:
Fampiasana habaka kapila
Fampahalalana momba ny rafitra
Araka ny aseho amin'ireto sary manaraka ireto:
Fikirana CWP sy fitantanana rakitra
Kaonty mailaka sy endri-javatra DNS
Plugins sy fikirana
Araka ny azonao an-tsaina «CWP»dia Rindrambaiko Maimaimpoana feno sy lehibe izay afaka mamaly ny ankamaroan'ny filan'ny tsirairay mpitantana tranokala. Ary aza adino izany «CWP» tsy tena a «Software Libre» ny tenany, satria tsy rakotry ny variant an'ny «Licencia Publica General de GNU» (Lisansa GNU General Public na GNU GPL na GPL fotsiny).
Fa azo zaraina, alaina, apetraka ary ampiasaina tsy misy fetra na fetra ara-dalàna, satria tsy manana fahazoan-dàlana amin'ny kinova maimaimpoana izany. Aorian'izay ao amin'ny lahatsoratra hafa dia hanohy hampiseho bebe kokoa an'ity fampiharana lehibe ity izahay. Na izany aza, raha efa nampiasainao «CWP», ampahafantaro anay ny zavatra niainanao tamin'ny fanamarihana, hampanan-karena ny fahalalana ny Vondron'olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » CWP: Famerenana amin'ny antsipiriany ny tontonana fanaraha-maso maimaim-poana amin'ny fampiantranoana tranonkala
NAZAuy dia hoy izy:
Avelako eto ny hevitro, apetrako eto izy ireo ary hasiako tsipiriany tsaratsara kokoa.
hahaha naoty ho an'ireo mpamorona an'ity bilaogy ity, niampanga fotsiny aho fa tsy afaka mamoaka amin'ny anaran'ny mpampiasa iray hafa ary "heloka izany" hahaha mazava ho azy fa hoentin'izy ireo any Cana aho, sa tsy izany?
Miala tsiny amin'ilay mpampiasa NAZA hehehe
Valio amin'i NAZAuy
GTA: San Andreas mamerina amin'ny Unity: misy fanavaozana vaovao azo
Navoaka tamin'ny fanatsarana ny webrender ny fanavaozana Firefox 69.0.3